Yaa horumarin kara caafimaadka Afrika? - BBC News Somali
BBC News, Somali
Yaa horumarin kara caafimaadka Afrika?
14 Sebtembar 2017
Xarunta caafimaadka ee Iyolwa ee waddanka Uganda
Koox khubaro dhanka caafimaadka ah ayaa waxa ay sheegayaan in ay suuragal tahay in jiil gudahii lagu soo yareyn karo kala duwanaanshaha dhanka caafimaadka ah ee u dhaxeeya Afrika iyo dunida inteeda kale.
Warbixin uu daabacay wargeyska caafimaadka ka faallooda ee Lancet, ayey khubaradu ku sheegeen in carruurta da'da yar ay isbadel muhiim ah ku keeni doonaan daryeelka caafimaadka.
Warbixintan ayaa maanta xilli dambe waxaa lagu soo bandhigi doonaa Xarunta Afrika ee Cilmi-baarista Caafimaadka iyo Dadka ee magaaladatan Nairobi.
Warbixintan ayaa waxaa wadajir u qoray in ka badan 20 hogaamiye oo ka shaqeeya daryeelka caafimaadka oo ay ka mid yihiin dadka siyaasadaha dajiya, aqoonyahanno iyo ganacsato.
Warbixintu waxa ay ka digaysaa in hannaanka caafimaadka aanan diiradda lagu saarin oo kaliya isbitaallada iyo bukaanada, balse sidoo kale diiradda la saaro tallaabooyinka ka hortagga ah iyadoo la adeegsanayo xalka gudaha.
Tusaale ahaan waxa ay ka digaysaa warbixintu khatarta weyn ee ka imanaysa cuduradda lala xiriiriyo tubaakada haddii dadka Afrika uusan ka faa'iidaysan fursadda taariikhiga ah ee lagaga hortegayo cabista sigaarka ee baahsan.
Waxa ay warbixintu leedahay maadaama da'yarta qaaradda lagu wado inay laba laabanto 450-ka milyan ee dhalinyarada ah wixii loo gaaro 2050-ka, ayaa dadka da'da yar waxa ay isbadel muhiim ah ku keeni doonaan hab nololeedka dadka iyo caafimaadkaba.
Warbixintu waxa ay sidoo kale ka digaysaa in haddii la dhimo maalgelinta caalamiga ah ay taa horseedi karto inay sii xumaato inta badan xaaladda caafimaad ee dadka ugu saboolsan koonkan.
Waxa ay warbixintu intaa ku dartay in inta badan dalalka ka hooseeya Saxaraha Afrika ay wax ka yar boqolkiiba saddex dakhliga ka soo gala wax soo saarka gudaha ay ku isticmaalaan caafimaadka, taas oo wax badan ka hoosaysaysa bartilmaameedka horumarinta adduunka.
Warbixintu waxa ay sidoo kale tilmaamaysaa in tiknolojiyadda cusub ee mobillada ay kaalin muhiim ah ka dheeli karaan arrintaas.
Tusaale ahaan barnaamij cusub oo Mobile-ka lagu shubto oo lagu magacaabo - mPedigree - oo lagu sameeyay gudaha dalka Ghana ayaa waxaa loogu talagalay in lagu aqoonsado dawooyinka been abuurka ah.
Fannaanka caanka ah ee Cumar Shoolli oo ka hadlay tarxiilkiisa
3 Saacadood ka hor
Sidee looga jawaabay hadalkii ka soo fakaday Bush ee ku saabsanaa Ciraaq
20 Daqiiqadood ka hor
Afgaanistaan: 'Sideen war u akhrin karaa anigoo afka uu ii daboolan yahay?'
6 Saacadood ka hor
"Waxba kuma jabna in Muslimiinta ay dhigtaan xaflad dhalasho"
16 Abriil 2022
Wax ka ogow gantaalka "dejiyay" markabkii dagaalka ee Ruushka
19 Abriil 2022
"Wiilkeyga iyo mid aan adeer u ahay ayaa dagaalka lagu dilay haddana nabaddaan ka shaqeynayaa"
8 Jannaayo 2022
Maxay tahay sababta uu dalkan isaga kireynayo xabsiyadiisa?
21 Disembar 2021
Muxuu damacsan yahay Putin, waa kan ciidammadiisa heeganka geliyee?
22 Disembar 2021
Shan arrimood oo ku saabsan xiisadda ka dhalatay ciidamada PSF ee Puntland?
27 Nofembar 2021
"Ninkeyga ayaa i fahansiiyay sida aan heestayda caanka nooqtay uga faa'iideysan karo"
19 Nofembar 2021
Muxuu yahay sharciga ay iska celiyeen Maxmed iyo qoyskiisa?
16 Nofembar 2021
Deni ma wuxuu u tartamayaa xilka madaxweynaha Soomaaliya?
Ugu akhris badan
Ruushka oo adeegsanaya xeelado reer galbeedka uga daran dagaalka
Maxaa kala qabsaday haweeney reer Ukraine ah iyo askari Ruush ah oo ninkeeda ka dilay?
Fannaanka caanka ah ee Soomaaliyeed ee qarka u saaran in Mareykanka laga tarxiilo
Maxay diintu ka qabtaa dilka qofka Nabiga aflagaaddeeya?
Sababta aad ku aamini kartid BBC News
Shuruucda xogta gaarka ah
© 2022 BBC. BBC masuul kama ahan macluumadka bogagga kale ee dibadda. Akhri xogta ku saabsan sida aan u abaarno bogagga dibadda.